आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल जेठ ७ गते सोमबार तदानुसार मे २१ तारीख::Pathivara News
आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल जेठ ७ गते सोमबार तदानुसार मे २१ तारीख
आज श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल ज्येष्ठ ७ गते सोमबार तदानुसार इश्वी सन् २०१८ मे २१ तारीख अधिकज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथी सप्तमी तिथी चन्द्रमा कर्कट राशिमा सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे /
शारीरिक आलस्यले गर्दा सामान्य कार्यक्षेत्रमा ढिलाई हुन सक्छ । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने छ । मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । प्रिय मित्रजनहरु बिचको भेटघाट ले मन प्रशन्न रहला ।
शुभचिन्तक हरुको साथ सहयोग द्वारा कार्य सम्पादनमा सहज हुनेछ । रोकिएका रहेका कामहरु बन्नेछ । पुरानो कार्य क्षेत्रमा मन चन्चल रहनाले नयाँ काम को थालनि हुन सक्नेछ । मित्र हरुको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । सामान्य चोट पटक आईपर्नेछ । खराब संगतका कारण सामान्य समस्या आइपर्न सक्नेछ । समयको सहि सदुपयोग गर्न नसक्नाले कार्य क्षेत्रमा साधारण ढिलाई भोग्नु पर्नेछ ।
पारीवारिक भेटघाटको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । दाम्पत्य सम्बन्धमा भने खटपट रहला । स्वास्थ सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउनेछ । आय आम्दानिका बिभिन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन ।
मानसिक चिन्ताले सताउनेछ । आँट शाहसमा कमि आउनाले कार्यसम्पादनमा समस्या आउन सक्छ । अधुरो यात्रा रहने योग रहेकोछ । अरुको छिटो बिश्वास गर्नाले सामान्य धोकामा परिएला । नयाँ कार्यको थालनि नगनू होला ।
दिदी बहिनीहरुको साथ सहयोगले दीगो फाईदा हुने कार्यको थालनि होला । आक्स्मिक धनलाभको सम्भाबना रहेको छ । बौधिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउला ।
बिद्यार्थी बर्गको बौधिक बिकाशका निम्ति समय राम्रो रहेको छ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर भईनेछ । श्रम र मेहेनतको राम्रो कदर हुनेछ तथा मानसम्मान प्राप्त हुने समय रहेको छ ।
बिशेष जिम्मेबारी बहन गनुपर्ने समय रहेको छ । ईष्ट मित्रजनको सहयोग प्राप्तहुनाले कार्य सहज रहला । मान्यजनको मार्गदर्शन अबलम्बन गर्नाले भाग्योदयको बाटो देखा पर्नेछ । आजको कार्यले भोलिलाई फाइदा रहनेछ ।
मानसीक चन्चलताले कार्य क्षेत्रमाझन्झट आई पर्नेछ । सामान्य बादबिवादको सामना गर्नु पर्ला । मनमा उत्पन्न बिभिन्न कुबिचारले समस्या निम्त्याउन सक्ला सजग रहनु पर्नेछ । समय त्यति राम्रो छैन् ।
बिश्वासिलो ब्यक्तिहरुबाट धोका हुन सक्ला । तपाईको कार्य बाट फाईदा लिनेहरुको सङख्यामा बृद्यि हुनेछ । नया कार्य थालनि गर्ने अबसरहरु प्राप्त हुनेछन । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश रहनछ ।
कार्यक्षेत्रमा प्रतिस्पधिहरुको बृद्यिहुनाले तपाईलाई सामान्य झन्झट आईपर्ला निर्णय गर्न नसक्नाले आफ्नो कमजोरी महसुस हुनेछ । अरुको संगतगर्ने बानिले सामान्य समस्या आइपर्ला । कसैको बिश्वास नगरेकै बेश हुनेछ ।
पठनपाठनको निम्ति समय राम्रो रहेको छ । गरिरहेको कार्य क्षेत्रमा मन चन्चल रहनाले अरु नयाँ काम को थालनि हुन सक्नेछ । बौधिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला । आम्दानिका बिभिन्न स्रोत हरु फेला पर्ने छन ।